Owesifazane waseNingizimu Afrika uba ngowesifazane wokuqala wase-Afrika ukuqala indiza - i-Afrikhepri Fondation
isonto, Januwari 17, 2021
Usomabhizinisi waseNingizimu Afrika uSiza Mzimela uba ngowesifazane wokuqala wase-Afrika ukwethula inkampani yezindiza ngokwakha I-Fly Blue Crane. Isikhulu esiPhezulu seSouth African Airways (SAA) kusukela ngo-2010, uSiza Mzimela usula futhi udala i-airline yakhe.
Fi-Blue Crane, i-hybrid entsha eNingizimu Afrika inkampani yezindiza yesifunda based EGoli, kanye nesikhungo sayo sokusebenza NOMA isikhumulo sezindiza samazwe omhlaba I-Tambo, eGoli, Afrika ENingizimu.Inkampani yezindiza iqale ukusebenza ngoSepthemba 1, 2015 ngezindiza ezimbili kuze kube manje I-145 Embraer ERJ enkonzweni phakathi kweGoli, Bloemfontein, Kimberley Nelspruit.
U-Helena de Magalhaes, oyinhloko yamaphrojekthi akhethekile eFly Blue Crane, uthe
“I-Fly Blue Crane, iyakujabulela ukunikeza amakhasimende ayo izinketho zokubhuka ezengeziwe ngokubambisana neTravelstart - enye yezindawo zokubhuka eziku-inthanethi ezinkulu kunazo zonke e-Afrika. Abahambi ababhukha ngeTravelstart manje sebengathola indlela entsha kaFly Blue Crane efaka okungcono kakhulu kokutholakala kokubili kanye nensizakalo eyenziwe ngokwezifiso ye-premium onboard.
Ukubungaza ukwethulwa kwalobu budlelwano, iFly Blue Crane inikeza isaphulelo esingu-10% sako konke ukubhuka okwenziwe amakhasimende ngezindiza ezisuka kuNovemba 25, 2015 kuya kuJanuwari 17, 2016. I-Fly Blue Crane inikeza izindiza phakathi kweGoli, iBloemfontein, iKimberley , ENelspruit naseKapa. "
Izikhwama ezingeziwe zingathengwa online ngesilinganiso esincishisiwe sika-30% kuze kufike emahoreni angama-24 ngaphambi kokuhamba
Izingane (umuntu ophakathi kweminyaka engu-2 no-11) angabheka imithwalo ebhekiwe mahhala enesisindo esifinyelela ku-20 kg, kanye nesihlalo esigoqekayo nesihlalo semoto, i-pramseat (isitulo esigoqekayo nesihlalo semoto akumele sithwelwe ekamelweni, kepha lifakwe endaweni yokubamba izindiza).
Ama-movie wase-Asia okufanele ubuke
Ngaphezu komdlalo - Okwembhalo (2010)
Umsuka wegama elithi Nègre (version kamite)
ICosmogony yamaRosicrucians - UMax Heindel (Umsindo)